Yakawedzera kukosha | Ehupfumi Zvemari
Encarni Arcoya | 13/10/2021 21:01 | Yakagadziridzwa ku 13/10/2021 21:13 | General hupfumi
Wakambonzwa nezvazvo here kuwedzera kukosha yezvakanaka, zvechigadzirwa, zvekambani, zvebasa? Unoziva here kuti izwi iri rinosanganisirei? Tenda kana kwete, icho chinhu chakakosha. Uye zvakawanda.
Kana iwe uchida kuziva chaiyo pfungwa yezwi iri, kana iwe uchida kuziva kuti ungaiwana sei mumakambani, zvigadzirwa, masevhisi ... uye maitiro ekuvandudza iyo, saka une makiyi ese aunoda kuziva.
1 Chii chakawedzerwa kukosha
1.1 Yakawedzera kukosha kwekambani
1.2 Yakawedzera kukosha kwemunhu
2 Maitiro ekuiwana mumakambani
3 Ungavandudza sei
4 Kukosha zvinhu
Chii chakawedzerwa kukosha
Tinogona kutsanangura kuwedzera kukosha se "kuwedzerwa kukosha kwehupfumi". Uye ndizvo zvazvinofungidzira kuwedzera kukosha kwakabhadharwa kune chakanaka kana sevhisi nekuti inochinja.
Semuenzaniso, fungidzira kuti iwe unotenga chidhori. Iyi inodhura iwe gumi euros. Nekudaro, iwe unosarudza kuisa mari mashanu euros mukuisa basa remhando yepamusoro, nematombo emabwe, zvishongo ... Izvi zvinoreva kuti, chidhori chaizodhura maeuro gumi nemashanu kana iwe uchida kuchitengesa kuti uwanezve mari yako uye nemari yedhori. Asi zvinoitika kuti unozvitengesa makumi mashanu nemashanu euros. Kana tikabvisa mari, 10-5 euros tingave ne15 euros. Ndiwo uchave iwo mutengo unowedzerwa, chii chinowanikwa zvakanyanya kana mari yatakaita kuti tishandure yabviswa.
Mune mamwe mazwi, icho chimwe chinhu 'chekuwedzera' icho chinobvumidza kuwedzera mutengo weizvozvo zvakanaka kana sevhisi nekuti yaita shanduko uye yakapihwa yakawanda kukosha.
Nenzira iyi, chimwe nechimwe chakanaka kana sevhisi inogona kuve yakaderera, yepakati kana yakakwira kuwedzerwa kukosha. Semuenzaniso:
Yakaderera yakawedzera kukosha: ingangove izvo zvinhu uye / kana masevhisi uko shanduko inoitika iri shoma uye hapana zvakawanda zvekugadzirisa nazvo. Kuve chinhu chisingakoshi, iyo yakawedzerwa kukosha iyo yainowana yakaderera. Uchaita purofiti shoma.
Pakati: izvo ndezvigadzirwa umo maitiro akajeka anotorwa ekuzvishandura, asi izvo hazvidi mari hombe.
Yakakwira yakawedzera kukosha: ndipo kana izvo zvinhu kana masevhisi paanoita shanduko ingangoita yakakwana, uchishandisa ruzivo rwemberi uye matekinoroji anovapa iwo kukosha kwakawanda.
Chaizvoizvo chero chigadzirwa chinogona kukwana mune chero eanosarudzwa. Muenzaniso, t-shirt.
Chingave chakadzikira kuwedzerwa kukosha kana iwe ukangoisa yakashongedzwa meseji pairi. Yepakati kukosha kana, semuenzaniso, iwe unoisunga nedayi tai ine yepakutanga uye inoda kuziva chimiro. Uye zvingave zvemhando yepamusoro kana iwe ukawedzerawo marhinestones uye kunyangwe tekinoroji system umo mavara ehembe yacho pachawo anoenda kune mutinhimira wemumhanzi.
Uye zvakare, iwe unofanirwa kuziva kuti haisi chete nyaya yezvinhu nemasevhisi. Iwe unogona zvakare kuve chikamu chevanhu, makambani ... Ngationei zvinotevera.
Yakawedzera kukosha kwekambani
Kana iri kambani, iyo yakawedzerwa kukosha inogona kunyatsoenderana nezvakanaka zvaunowana. Ndokunge, mutsauko pakati pemari nemari, sezvo izvo zvave zvichikonzerwa nebasa rakanaka iro rinoita.
Ehezve, iyo yakawedzerwa kukosha inogona zvakare kupihwa kuburikidza nekuvandudzwa pabasa, muhukama pakati pevashandi nevashandirwi ...
Yakawedzera kukosha kwemunhu
Fungidzira munhu. Uyu haana zvidzidzo uye anoshanda pane izvo zvavakadzidziswa, asi pasina zvimwe. Zvino, fungidzira munhu iye asina zvidzidzo. Iye anoshanda nenzira yaakadzidziswa, asi achishandisa shungu uye kuwana mhedzisiro iyo vamwe vasingakwanise. Ivo vaviri vakawedzera kukosha kana chechipiri chete?
Chaizvoizvo, ese ari maviri akawedzera kukosha, asi yechipiri ine yakawanda kupfuura yekutanga.
Muzhinji, iyo yakawedzera kukosha kwevanhu inoreva izvi zvidzidzo, ruzivo, kudzidziswa ... pamwe neruzivo, kuziva-sei, hunyanzvi, kugona ...
Maitiro ekuiwana mumakambani
Kuwana kukosha kwakawedzerwa mumakambani hachisi chinhu chinowanzoonekwa neziso rakashama. Nekudaro, zvinokwanisika. Kune izvi, zvakafanira gadzira chimiro chevatengi kuti uwane zvavanoda, izvo zvavanoda, zvavari kutsvaga ...
Kamwe kana kutengesa kwaitika, mwero wekugutsikana unofanirwa zvakare kuongororwa; ndiko kuti, kana achifara, kana iwe uchigona kugadzirisa chimwe chinhu, nezvimwe.
Ehezve, makambani haakwanise kungowana chete kuwedzerwa kukosha muzvigadzirwa uye / kana masevhisi, asi izvi zvinogona kuwanikwa mukati mevanhu vanoshanda imomo vega, vanogona kupa chimwe chinhu kune bhizinesi uye kunyange kurivandudza.
Kunyangwe zvinogara zvichitaurwa kuti zvese zvakatogadzirwa uye kuti zvakaoma kwazvo kupa vashandisi chimwe chinhu chiri nani kana chimwe chinhu chakasarudzika zvachose, zvinogona kuitika.
Munyaya ye kunatsiridza iyo yakawedzerwa kukosha isu hatisi kuzokuudza kuti zvichave nyore, kure nazvo. Asi iwe une nzira dzinoverengeka:
Kupa chimwe chinhu chisingapiwe nemumwe munhu. Inogona kuve chinhu chinhu, chinhu chisingabatike, chakakosha dhisikaundi, chigadzirwa kana sevhisi inokombama curl yezvinopihwa nevamwe ...
Wedzera imwe yekuwedzera. Ndokunge, isa chimwe chinhu pairi icho chinovandudza kunaka kwayo. Inogona zvakare kukurumidza ...
Pfuura zvinotarisirwa nevatengi. Izvi zvimwe zviri nyore. Fungidzira kuti ivo vanokukumbira iwe chigadzirwa. Uye iwe unotumira yekutenda meseji, pamusoro peiyo yakajairika ine yekutenga yekusimbisa, invoice uye nevamwe. Ipapo, iwe unogadzirira izvo zvinotumirwa uye unozvigadzira pachako. Kana iwe uchichigamuchira, zvaunotarisira, zvichienzaniswa nezvimwe zvese zvaunenge watenga iwe paInternet, zvichapfuura, uye izvo zvinoita kuti zvinzwe zvakakosha kwauri. Uye kutenga zvakare kana mukana ukamuka.
Mune ino kesi, tekinoroji uye ruzivo zvinogona kuve kiyi yekuvandudza uye kupa yakakura yakawedzera kukosha. Kushamwaridzana zvakanyanya nemutengi wako, iko kusununguka kwekutenga kubva kwauri, iko kuchimbidza kana kuita kwako kwakasiyana mapoinzi ekuti uwedzere kuwedzera kukosha.
Chigadzirwa kana sevhisi yakakosha kana ichishandira kugutsa chishuwo chevatengi kana chishuwo. Ndokureva, ine kukosha kana vanhu vachichikumbira. Naizvozvo, izvo zvinhu zvakasimbiswa kukosha uku ndeizvi:
Simba rekugutsa icho chishuwo kana kuda.
Zvese izvi seti inova chikamu cheizvozvo zvakanaka kana sevhisi uye inozvipa nehukuru kana kushoma kuwedzerwa kukosha.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » General hupfumi » Kukosha kwawedzerwa